WinX DVD Ripper, DVD-yadaadii hore waxaad ugu badashaa MP4 si fudud | War gadget
Ku guuleysto Star Wars PS4, DVD-yada iyo alaabada lagu ciyaaro. Kaqeybgal oo hel WinX DVD Ripper bilaash
Nacho Cuesta | 01/05/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 29/04/2021 13:17 | Software
Munaasabadda sanad-guurada Maalinta Xiddigaha, WinXDVD waxay rabtaa inay ugu dabaaldegto qaab ahaan Bixinta suurtagalnimada ku guuleysiga abaalmarinno kala duwan sida PS4, DVD-yada loo yaqaan 'Star Wars saga', alaabada carruurtu ku ciyaarto iyo 500 oo shati oo maalinle ah oo loo yaqaan 'WinX DVD Ripper application'.
Thanks to qalabyada sida WinX DVD Ripper waxaan fayl kasta ka soo wareejin karnaa DVD disc ugu yaraan shan daqiiqo oo leh xawaaraha GPU. Waqti yar oo la arko sida waagii hore ay u qaadatay in la sameeyo keyd qiyaastii saacad iyo bar ama mararka qaarkood ilaa labo ah iyadoo kuxiran culeyska shaqada.
Nuqul ka sameynta filim duug ah ama casri ah MP4-ka ayaa kuu oggolaanaya inaad dhoofiso, tusaale ahaan, pendrive oo aad daawato adigoon haysan ciyaaryahan. Ka sokow, waxaa jira wax ka yar seddex tallaabo oo lagu bilaabi karo iyo daqiiqado yar oo lagu dhoofiyo galka asalka ah ee arjiga, Fiidiyowyada WinXVideos.
1 Bixinta si loogu dabaaldego maalinta Xiddigaha Adduunka
2 U beddel filim qaab kale saddex tallaabo
3 Codsi aad u badan
4 Sida loogu badalo fiidiyoow ku jira arjiga
Bixinta si loogu dabaaldego maalinta Xiddigaha Adduunka
4-ta Maajo kasta, Maalinta Dagaallada Xiddigaha waa loo dabaaldegaa, waa xushmad uu abuuray George Lucas oo dhashay 1979, wadar ahaan 42 sano kahor illaa filimkii ugu horreeyay. WinXDVD waxay go'aansatay inay soo bandhigto dhacdo gaar ah oo hadiyado loogu talagalay ka qaybgalayaasha, kuwaas oo awoodi doona inay ku guuleystaan ​​DVD-yada PS4 PSXNUMX.
WinXDVD's Ololaha dabaaldega Maalinta Dagaallada Xiddigaha ayaa ka qaybqaadan kara wadaagista sawirrada Star Wars marka lagu daro ka jawaab celinta su'aalaha Star Wars iyo ku biirista WinXDVD Movies Facebook Group. Sidoo kale, 500 nuqul oo WinX DVD Ripper ah ayaa lagu guuleysan karaa iyadoo la wadaago maalin kasta.
Ololaha 'Star Wars' waa laba wareeg oo wareeg ah, wareegga koowaad wuxuu soconayaa Abriil 24 ilaa 5ta May; wareegga labaad waa laga bilaabo 6da ilaa 13ka Maajo. Nooca hadiyadeed ee WinX DVD Ripper wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay la kulmaan barnaamijka buuxa ee muuqaalka ah 15 maalmood ka dib firfircoonaanta. U cusbooneysiinta nooca nolosha ee WinX DVD Ripper waxay leedahay dalab gaar ah wakhti xaddidan, tan waa inaad u cusbooneysiisaa liisanka noolasha WinX DVD Ripper oo leh dalab gaar ah.
U beddel filim qaab kale saddex tallaabo
Filimada ugu badan waxay u muuqdaan inay heystaan ​​filimo CD-yada iyo DVD-yada, iyagoo keydinaya filimno badan oo la soo ururiyay, iyo sidoo kale taxane iyo dukumentiyo telefishanno laga daawado. Iyada oo la adeegsanayo dariiqyada adag ee maanta, waxaa kaliya loo baahan yahay in lagu wareejiyo midkood oo si dhakhso leh loogu ciyaaro iyadoon loo baahnayn DVD / Blu-Ray player, ka shaqee in barnaamijka WinX DVD Ripper uu si weyn u fududeeyo.
Markaad furto WinX DVD Ripper, waxay ku tusaysaa dhex-dhexaad cad oo fudud, waxay sidoo kale muujineysaa hage horudhac ah oo lagu bilaabayo adeegsiga aaladda tafatirka. Sida ku cad websaydhka, waxaa jira saddex tallaabo oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo oo aad u jeexdo filimkaas, taxanaha ama dukumiintiga.
Nidaamka waxaa lagu soo bandhigi doonaa daaqadda midigta sare, markaa waxaad arki doontaa dhammaan sawirrada illaa dhammaadka ka dibna waxaad ku ciyaari doontaa faylkaas qalab kasta oo u ciyaara qaabkaas. Ahaanshaha MP4, waxaa jira dad badan oo sameeya, oo ay ku jiraan telefishannada leh Smart TV iyada oo loo marayo dekedda USB-ga ah.
Codsigu sidoo kale wuxuu leeyahay qaabab wax soo saar badan oo dheeri ah haddii aad u baahatid wax kale oo aan ahayn Mp4, marka aad geliso saxanka, dhagsii Disc (DVD icon), dhagsii oo waxay bilaabi doontaa inay soo rarto illaa ay kaa tusayso dhammaan faylasha wax soo saarka, inta udhaxeysa Iyaga ayaa ah kuwa ugu caansan sida AVI, MP4 ee iPad iyo iPhone, WMV, MPG, M4V iyo MOV, iyo kuwo kale oo badan.
Codsi aad u badan
WinX DVD Ripper wuxuu awood u leeyahay inuu jeexjeexo DVD-yada aad gabowday si aad uhesho MP4, FLV, AVI, MOV, MP3, sidoo kale akhrin kara iPhone, iPad, Android, Windows iyo Mac. filimka ama feylka lagu duubay cajaladaas oo aad rabto inaad kala soo baxdo kumbuyuutarka xilligaas saxda ah.
Intaa waxaa dheer, qalabku wuxuu la shaqeeyaa DVD kasta, oo ay ku jiraan DVD-yada burburay, qaab-dhismeedka qaab-dhismeedkoodu liito, DVD-duuggii hore, kuwa cusub ee la sii daayay, iyo wax kasta oo ka socda ururintaada. Waxay badanaa aqrisaa mid kasta oo saxannada ah dhibaato la'aan, sameynta nuqul kaamil ah fiidiyowyadaas aad keydisay.
WinX DVD Ripper ayaa dhaafsiisan gudbinta faylasha oo dhan si deg deg ah, waxay kaloo siineysaa ikhtiyaarka in la gooyo, la isku daro, la jaro qayb ka mid ah fiidiyowyada, lagu daro cinwaanno hoose ama la isku hagaajiyo xuduudaha. Codsiga waxaa ka mid ah tikniyoolajiyadda dardargelinta qalabka Lakabka 3 si shaqada loogu qabto illaa shan daqiiqo, waqti aad u hooseeya.
Sida loogu badalo fiidiyoow ku jira arjiga
Si dhakhso ah loogu badalo DVD qaab la akhrin karo oo qalab kasta ah waxaan u baahanahay saxanka su'aasha laga qabo iyo aqristaha DVD / rikooriyaha kumbuyuutarka, ama Windows ama Mac OS. Si aad nuqul u sameyso samee waxyaabaha soo socda:
Gali DVD-ga DVD-ga DVD-ga / qoraaga
Dhagsii Cajaladda muujineysa erayga DVD oo guji “Wanaagsan”
Waxay qaadan doontaa dhowr ilbiriqsi oo kaliya in la soo raro si laguu siiyo dhammaan qaababka lagu sameyn karo nuqul sax ah feylka
Xulo qaabka wax soo saarka aad rabto, tusaale ahaan mid ka mid ah kuwa hadda sida ugu badan loo isticmaalo waa MP4, dhagsii "Wanaagsan" markale iyo inaad bilowdo jeexitaanka, dhagsii badhanka "Run" oo buluug ah sugna in mashruucu dhammaado
Xusuusnow inay ku tusinayso jidka uu faylka hoos ku aadaa, halkaas oo ay ku qoran tahay "Destination folder"
Haddii aad jeceshahay arjiga, xusuusnow inaad ruqsaddaada ka heli karto gebi ahaanba bilaash ka qayb qaadashada ololaha dabaaldega Maalinta Dagaallada Xiddigaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Ku guuleysto Star Wars PS4, DVD-yada iyo alaabada lagu ciyaaro. Kaqeybgal oo hel WinX DVD Ripper bilaash
Jabra Elite 45h, waa wehelka ugu fiican ee shaqada telefishanka [DIB U EEGID]